တှမျဇီဘီ နဲ့ ဖိုဆုမနျဆာ တို့နဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးမြား……. |
March 4, 2020 Writer News 0
ယူနိုကျတကျရဲ့ ဗဟိုနောကျခံလူ တှမျဇီဘီကတော့ ဒဏျရာက ပွနျလညျသကျသာလာပွီးနောကျနညျးပွ ဆိုးလျရှားရဲ့ လူစာရငျးမှာပါဝငျခှငျ့ရဖို့ ဖိအားပေး၊ကွိုးစားသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တှမျဇီဘီက အနာဂတျမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးကို အဓိက ဦးဆောငျနိုငျတဲ့ ကစားသမားလညျး ဖွဈလိုကွောငျး ဆိုပါတယျ။
“သသေခြောခြာမပွောနိုငျပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ အသငျးကိုဦးဆောငျနိုငျတဲ့ အသငျး ခေါငျးဆောငျဖွဈ လိုပါတယျ။အသငျးကို ပွောငျးလဲနိုငျတဲ့သူမြိုးပေါ့။ ဘောလုံးကစားတဲ့အခါမှာ အပွငျလူတှမေမွငျနိုငျတဲ့ ပွဿနာတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။
ကြှနျတျောကတော့ လူငယျကစားသမားတှကေို အမွဲလိုလိုပွောထားပါတယျ။ သူတို့အနနေဲ့တဈခုခုပွောဖို့လိုရငျ၊ တဈယောကျယောကျကို စကားပွောဖို့ လိုအပျရငျ ကြှနျတေျာ့ကိုပွောပါဆိုပွီး သူတိုိ့ကိုပွောထားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ လူငယျအစုအဖှဲ့တှနေဲ့ ကြှနျတျောက ကွီးပွငျးခဲ့ရတာလေ။ ဘောလုံးသမားတှအေနနေဲ့ ကှငျးပွငျက သကျရောကျမှုက ကှငျးထဲအထိ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိ နိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အသငျးသားတှေ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးရာနှုနျးပွညျ့ရှိမယျဆိုရငျ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ ပိုကောငျးတဲ့အသငျးဖွဈလာမှာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ ဗီလာကို အငှား သှားကစားရတုနျးက အတှအေ့ကွုံတှေ အမြားကွီးရခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ပုဂ်ဂလိက ခံစားခကျြတှေ မထားပါဘူး။ ကစားဖျောတှကေ ကြှနျတေျာ့ကို ပိုကောငျးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ကွပါတယျ။ ဘောလုံးလောကမှာ လှဲခြျောနတောတှေ အမြားကွီးပါပဲ။
လူတှဟော ပုဂ်ဂိုလျရေး ခံစားခကျြတှေ ထားလေ့ ရှိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကှငျးထဲကို ရောကျသှားတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဖွဈသှားပါပွီ။ ကြှနျတျောတို့အလုပျကို အကောငျးဆုံးလုပျဖို့လိုအပျပါတယျ။ အဲလိုမလုပျဘူးဆိုရငျ အပွောခံရမှာအသအေခြာပါပဲ။ အခုဆိုရငျ အဝတျလဲခနျးက တျောတျောမြားမြားပွောငျးလဲသှား ခဲ့ပါပွီ။ အသငျးကထှကျသှားတဲ့ကစားသမားတှရှေိသလို အသဈရောကျလာတဲ့ကစားသမားတှရှေိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လူတိုငျးဆီကတော့ အမွဲတမျးအကွံဉာဏျ မရယူနိုငျပါဘူး။ ဒါတှဟော ဘောလုံးလောကမှာ ပုံမှနျဖွဈနကေအြခွအေနတှေပေါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တဈယောကျယောကျနဲ့ရငျးနှီးတဲ့ဆကျဆံရေးတညျဆောကျဖို့အတှကျ ကှငျးပွငျပမှာလုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောဆိုရငျ လူငယျကစားသမားတှအေမြားကွီးနဲ့ အမွဲလိုလို အဆကျအသှယျရှိပါတယျ။ သူတို့ဆီကို အမွဲလိုလိုရောကျဖွဈပါတယျ။ သူတို့လေးတှကေစားတာကွညျ့ရတာကိုလညျး ကွိုကျပါတယျ။ ဖိုဆုမနျဆာ ၊ တျောမီနေး နဲ့ ရကျရျှဖို့ဒျ တို့ကလညျး ဒီလို စနဈတဈခုတညျးက လာကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ တဈခြိနျတညျးမှာ တူညီတဲ့အတှအေ့ကွုံတှရှေိခဲ့ကွလို့ ရငျးနှီးခဲ့ကွတာပါ။”ဆိုပွီး တှမျဇီဘီကပွောပါတယျ။ တှမျဇီဘီဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဒီဇငျဘာလမှာ တံကောကျကွောဒဏျရာရရှိခဲ့လို့ အနားယူခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။ အခုတော့ ကွုံခိုငျမှု ပွနျလညျ ပွညျ့ဝလာပွီး ယူနိုကျတကျရဲ့ U23 အသငျးနဲ့အတူ ပှဲထှကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့နောကျခံလူ ဖိုဆုမနျဆာကတော့ အဲရဈဘိုငျလီရဲ့ကောငျးကွောငျးတှကေိုပွောဆိုထား ပါတယျ။ ဘိုငျလီနဲ့မနျဆာတို့ဟာ ဒီနှဈရာသီ အစပိုငျးကတညျး ကာလကွာရှညျ ဒဏျရာပွဿနာတှရှေိနခေဲ့ပွီး အသငျးမှာ ပါဝငျကစား ခဲ့ရခွငျးမရှိပါဘူး။ ဘိုငျလီကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ခယျြဆီးနဲ့ပှဲ ၊ ကလပျဘရုဂျြတို့နဲ့ပှဲတှမှော စီနီယာအသငျးရဲ့လူစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး မနျဆာကလညျး ယူ ၂၃ ပှဲစဉျမှာပွနျကစားနိုငျနပေါပွီ။ “ဘိုငျလီက အသငျးဖျောကောငျးတဈယောကျပါ။ သူဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ အဈကိုတဈယောကျ လိုပါပဲ။ ကြှနျတျော ဆိုးတဲ့ အခြိနျတှမှော သူကကြှနျတေျာ့ကိုဖေးမကူညီခဲ့သလို၊ ကောငျးတဲ့အခြိနျတှမှောလညျး အတူတူရှိပေးခဲ့ သူတဈယောကျပါ။ သူ ဒဏျရာကပွနျလညျသကျသာလာလို့ ကြှနျတျောဝမျးသာရပါတယျ။ ခယျြဆီးနဲ့ ပှဲ ၊ ကလပျဘရုချြနဲ့ပှဲတှမှော သူကောငျးကောငျးကစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့တှေ အခြိနျအကွာကွီး အတူတကှ အလုပျကွိုးစားခဲ့ကွပါတယျ။ မှောငျမိုကျတဲ့နရေ့ကျတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မှောငျမိုကျပွီးရငျ အခွားတဈဖကျမှာ အလငျးရောငျရှိတယျဆိုတာကိုသိခဲ့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ရညျရှယျခကျြတှခေမြှတျကာ ကွိုးစားပွီး အလုပျတှေ လုပျဆောငျသှားရပါမယျ။ အခုကြှနျတေျာ့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျပွီး အလုပျကွိုးစားဖို့ပါပဲ”ဆိုပွီး ဖိုဆုမနျဆာကပွောထားပါတယျ။
တွမ်ဇီဘီ နဲ့ ဖိုဆုမန်ဆာ တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းများ…….
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဗဟိုနောက်ခံလူ တွမ်ဇီဘီကတော့ ဒဏ်ရာက ပြန်လည်သက်သာလာပြီးနောက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ လူစာရင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ ဖိအားပေး၊ကြိုးစားသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တွမ်ဇီဘီက အနာဂတ်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို အဓိက ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ကစားသမားလည်း ဖြစ်လိုကြောင်း ဆိုပါတယ်။
“သေသေချာချာမပြောနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အသင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အသင်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ် လိုပါတယ်။အသင်းကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့။ ဘောလုံးကစားတဲ့အခါမှာ အပြင်လူတွေမမြင်နိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လူငယ်ကစားသမားတွေကို အမြဲလိုလိုပြောထားပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့တစ်ခုခုပြောဖို့လိုရင်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို စကားပြောဖို့ လိုအပ်ရင် ကျွန်တော့်ကိုပြောပါဆိုပြီး သူတိုိ့ကိုပြောထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူငယ်အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ ကျွန်တော်က ကြီးပြင်းခဲ့ရတာလေ။ ဘောလုံးသမားတွေအနေနဲ့ ကွင်းပြင်က သက်ရောက်မှုက ကွင်းထဲအထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းသားတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရာနှုန်းပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင် ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဗီလာကို အငှား သွားကစားရတုန်းက အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေ မထားပါဘူး။ ကစားဖော်တွေက ကျွန်တော့်ကို ပိုကောင်းဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှာ လွဲချော်နေတာတွေ အများကြီးပါပဲ။ လူတွေဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခံစားချက်တွေ ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွင်းထဲကို ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် အပြောခံရမှာအသေအချာပါပဲ။ အခုဆိုရင် အ၀တ်လဲခန်းက တော်တော်များများပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ အသင်းကထွက်သွားတဲ့ကစားသမားတွေရှိသလို အသစ်ရောက်လာတဲ့ကစားသမားတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းဆီကတော့ အမြဲတမ်းအကြံဉာဏ် မရယူနိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ ဘောလုံးလောကမှာ ပုံမှန်ဖြစ်နေကျအခြေအနေတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကွင်းပြင်ပမှာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် လူငယ်ကစားသမားတွေအများကြီးနဲ့ အမြဲလိုလိုအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆီကို အမြဲလိုလိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေကစားတာကြည့်ရတာကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဖိုဆုမန်ဆာ ၊ တော်မီနေး နဲ့ ရက်ရ်ှဖို့ဒ် တို့ကလည်း ဒီလို စနစ်တစ်ခုတည်းက လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ တူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ကြလို့ ရင်းနှီးခဲ့ကြတာပါ။”ဆိုပြီး တွမ်ဇီဘီကပြောပါတယ်။ တွမ်ဇီဘီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာ တံကောက်ကြောဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ အနားယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ကြုံခိုင်မှု ပြန်လည် ပြည့်ဝလာပြီး ယူနိုက်တက်ရဲ့ U23 အသင်းနဲ့အတူ ပွဲထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ ဖိုဆုမန်ဆာကတော့ အဲရစ်ဘိုင်လီရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေကိုပြောဆိုထား ပါတယ်။ ဘိုင်လီနဲ့မန်ဆာတို့ဟာ ဒီနှစ်ရာသီ အစပိုင်းကတည်း ကာလကြာရှည် ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေခဲ့ပြီး အသင်းမှာ ပါဝင်ကစား ခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူး။ ဘိုင်လီကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ချယ်ဆီးနဲ့ပွဲ ၊ ကလပ်ဘရုဂ်ျတို့နဲ့ပွဲတွေမှာ စီနီယာအသင်းရဲ့လူစာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး မန်ဆာကလည်း ယူ ၂၃ ပွဲစဉ်မှာပြန်ကစားနိုင်နေပါပြီ။ “ဘိုင်လီက အသင်းဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အစ်ကိုတစ်ယောက် လိုပါပဲ။ ကျွန်တော် ဆိုးတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူကကျွန်တော့်ကိုဖေးမကူညီခဲ့သလို၊ ကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း အတူတူရှိပေးခဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သူ ဒဏ်ရာကပြန်လည်သက်သာလာလို့ ကျွန်တော်ဝမ်းသာရပါတယ်။ ချယ်ဆီးနဲ့ ပွဲ ၊ ကလပ်ဘရုခ်ျနဲ့ပွဲတွေမှာ သူကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ အချိန်အကြာကြီး အတူတကွ အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ မှောင်မိုက်တဲ့နေ့ရက်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှောင်မိုက်ပြီးရင် အခြားတစ်ဖက်မှာ အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေချမှတ်ကာ ကြိုးစားပြီး အလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်သွားရပါမယ်။ အခုကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားဖို့ပါပဲ”ဆိုပြီး ဖိုဆုမန်ဆာကပြောထားပါတယ်။